केकीको रोजाईमा प्रियंका र ऋचा, नायक चाहिं को त ? « Ramailo छ
केकीको रोजाईमा प्रियंका र ऋचा, नायक चाहिं को त ?
नायिका केकी अधिकारीले निर्माण गर्ने फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’को औपचारिक घोषणा गरिएको छ । फिल्म घोषणा कार्यक्रममा नायिका तथा निर्मात्री अधिकारीले सृजनालाई शक्ति मान्दै फिल्म निर्माणमा हात हालेको बताइन् । केकीको पहिलो फिल्मलाई विशाल भण्डारीले निर्देशन गर्नेछन् । म्युजिक भिडियो निर्देशक भण्डारीको ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ पहिलो निर्देशकिय फिल्म हो ।
सपनाको कथा भनिएको फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’मा केकी सहित नायिका प्रियंका कार्की, ऋचा शर्मा, विनोद न्यौपाने, बुद्धि तामाङ, रबिन्द्र झा, सृजना कार्की र कुसाग्र भट्टराईको मुख्य भूमिका रहनेछ । शान बस्न्यातको लेखन रहेको फिल्ममा अर्जुन तिवारीको छायाँकन, राजनराज सिवाकोटी, अर्जुन पोखरेल र काली प्रसाद बाँस्कोटाको संगीत रहनेछ । नृत्य निर्देशन गम्भिर विष्टले गर्नेछन् ।
कोहलपुर एक्सप्रेसको सम्पूर्ण जसो छायाँकन नेपालगञ्जमा हुनेछ । यही कात्तिकको दोश्रो सातादेखि छायाँकन सुरु गर्ने निर्माण पक्षको योजना छ । फिल्ममा तीन नायिका केकी, प्रियंका र ऋचा रहंदा नायकको रुपमा भने मोडल विनोद ढकाल मात्रै रहेका छन् ।